लकडाउनका बेला कस्तो समस्या झेलिरहेका छन नेपाली किशोरकिशोरीहरू? हेर्नुस् – KhabarTime
लकडाउनका बेला कस्तो समस्या झेलिरहेका छन नेपाली किशोरकिशोरीहरू? हेर्नुस्
सुनिता खड्का । कोभिड– १९ का कारण लामो समयदेखि लकडाउन छ । हरेक पेशा, व्यापार, व्यावसाय धराशायी बनेको छ जसको कारणले हरेक परिवारका सदस्यले विभिन्न खालका सम’स्या झे’लिरहेका छन् । यस्तो बेलामा परिवारमा कसरी शारिरि’क र मान’सिक रूपमा स्वस्थ्य भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अभिभावकबीचको स’म्बन्ध र पारिवारिक वातावरणले किशोरकिशोरीमा प्रत्यक्ष अस’र पार्छ । कुनै सम’स्या आएमा अभिभावकले विश्वासिलो स्रोतसँग छलफल गरी परिवारमा नकारात्मक अ’सर नपर्ने गरी स’मस्या सुल्झाउनुपर्छ । यस्तो गरेमा अभिभावकको आचरणबाट किशोरकिशोरीले पनि परिस्थितिलाई सहज रूपमा लिने र समा’धान गर्ने सीप सिक्छन् ।
यसले उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्दछः ‘म को हु““, मैले यो समाजमा कस्तो पहिचान बनाउनु पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजीमा आफ्नो पहिचान खोज्छन् । जहा“ उनीहरू स्थापित हुन सक्छन् । किशोर वा किशोरीलाई समाजमा सहभागीताको अवसर र अधिकार दिनुपर्छ । जसबाट उनीहरूमा स्वामित्वको भावना विकास हुन्छ र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सिक्छन् । साथीहरूको संगतबाट नै किशोरकिशोरीले स’म्बन्ध कसरी सुरु गर्ने,सम्बन्धलाई कसरी विस्तार गर्ने, सम्बन्धको महत्व, सम्बन्धलाई कसरी कायम राख्ने, विच्छेद गर्ने कुरा सिक्नुका साथै, किशोरकिशोरी दुबै सामू’हिक रूपमा काम गर्न थाल्छन् । एक अर्कामा घनिष्ट सम्बन्ध बनाउँछन् । जसबाट उनीहरूले आफ्नो योग्यता, निर्णय गर्ने क्षमता, समाजसँग जोडिन आउने हरेक गतिविधि, एकआपसमा सहयोग र हेरचाह गर्ने सीपको विकास गर्छन् ।
यस्ता श्रीमति जसले श्रीमानलाई कहिल्यै प्रगती गर्न दिनैनन् !